Tag: heerarka beddelashada | Martech Zone
Tag: qiimaha beddelaadda
Tilmaamaha laga helo Goobaha Beddelaya Sare
Talaado, July 16, 2019 Talaado, July 16, 2019 Dana Roth
Ma jiraan wax niyad jab leh oo ka badan inaad haysato olole xayeysiis xayeysiis ah oo lagu guuleysto oo baabuur badan oo taraafikada ah u kaxaynaya boggaaga laakiin wuxuu sababay is-beddel hooseeya. Nasiib darrose, suuqgeyaal badan oo dijitaal ah ayaa tan soo maray, xalkuna waa isku mid: ku hagaaji boggaaga waxyaabo badan oo beddelaya. Ugu dambeyntiina, qeybta ugu adag ayaa ah qofka oo aan albaabka la aadin, ee ay gudaha gasho. Ka dib markii aan la shaqeyney boqolaal goobood, waxaan la kulanay talooyinka soo socda
Goobaha badankood waxay lumiyaan qiyaastii kalabar booqdayaashooda sababtoo ah xawaaraha bogga oo gaabis ah. Xaqiiqdii, celceliska heerka bounce-ka boggaga desktop-ka waa 42%, celceliska soo-kabashada bogga mobilka wareega waa 58%, celceliska celceliska bogga soo degitaanka boost-gujintu wuxuu u dhexeeyaa 60 illaa 90%. Lambarjarin nambarada si kasta ha noqotee, gaar ahaan tixgelinta isticmaalka mobilada ayaa sii kordheysa wayna sii adkaanaysaa maalinba maalinta ka dambeysa soo jiidashada iyo ilaalinta dareenka macaamiisha. Sida laga soo xigtay Google, ka
Marka ay timaado dukaamaysiga internetka, habdhaqanka dukaameysigu runtii wuxuu ku soo dhacayaa qaar ka mid ah curiyeyaasha muhiimka ah: Rabitaan - haddii isticmaaluhu u baahan yahay ama uusan u baahnayn sheyga lagu iibinayo qadka. Qiimaha - in sheyga qiimaha uu ka adkaaday iyo in kale. Badeecad - ha ahaato ama ha ahaato sheyga sida loo xayeysiiyay, iyada oo dib u eegistu inta badan gacan ka geysato go'aanka. Aaminaad - iibiyaha aad wax ka iibsaneyso iyo in kale
Maxay Suuqleyda Aaminsan Yihiin 3da Guul ee Ugu Horeeya Qabashada Hogaamiyaasha
Arbacada, February 24, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Dadweynihii waaweynaa ee ku sugnaa Formstack waxay daraasad ku sameeyeen 200 ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexe ee Maraykanka iyo kuwa aan macaash doonka ahayn si loo ogaado meesha ay suuqyadu ku socdaan sax iyo khalad xeeladahooda jiilka hogaaminta. Infografigani waa aragti guud oo ah Xaaladda Qabashada Macdanta ee 2016 warbixinta oo leh aragtiyo muhiim ah oo muhiim ah oo ku saabsan caqabadaha iyo istiraatiijiyadda qabashada hoggaanka. Raadintooda ugu horreysa, suuqgeyntaasi waxay u baahan tahay aragti ku saabsan iibka xirmaya, waa mid ka sii muhiimsan. Arrin xiiso leh ayaa ku filan, shirkado badan ayaa ka fog iibka suuqgeynta